घरमा कछुवा यो स्थानमा राख्नुहोस, घरमा बर्षने छ ‘धन, सुख र शान्ति’ – Krazy NepaL
March 17, 2021 1529
काठमाडौं । अघिल्लो वर्षको विनाशकारी भूकम्पले भक्तपुर नासमनाकी बुद्धलक्ष्मी शिल्पकारको घर भत्कियो। अहिले बुद्धलक्ष्मी सोही स्थानमा भग्नावशेष हटाएर नयाँ घर बनाउँदै छन्। तल्लो तलाको गाह्रो उठाउने काम भइरहेको छ। नयाँ घरको जगमा भने उनले ढुंगाको राखेकी छन्। घर बलियो हुने विश्वासले घरको जगमा कछुवा राखेको उनी बताउँछिन्।
‘कछुवाले घर थामिराख्छ नि। पहिलेको घर भत्कियो अब नभत्कियोस् भनेर कछुवा राखेको,’ उनले भनिन्। नासमनाकै मूर्तिकारले बनाएको कछुवाको मूर्ति उनले जगमा राखेकी हुन्।
कछुवाले भार थाम्ने विश्वास
कछुवाले घरको भार थाम्ने र जग बलियो हुने विश्वास काठमाडौं उपत्यकाका नेवारी समुदायमा विद्यमान छ। नेवारी संस्कृतिका जानकार भूप्रकाश जोशी भन्छन्, ‘घरको भार थाम्ने विश्वासका कारण नेवार समुदायमा घरको जगमा कछुवाको मूर्ति राख्ने चलन छ।’
प्राचीन कालदेखि नै प्रचलनमा रहेको यो परम्परालाई काठमाडौंका नेवार समुदायले निरन्तरता दिँदै आएको हो। संस्कृतिविद् पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठ पनि नेवार समुदायले यसलाई कुनै न कुनै रुपले निरन्तरता दिँदै आएको बताउँछन्।
भूकम्पपछि निजी तथा सामुदायिक आवास पुनर्निर्माणका क्रममा पनि काठमाडौं उपत्यकाका नेवारले जगमा कछुवा राख्ने चलनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।
दुई सयदेखि १५ सयका कछुवा
ढुंगाका कलात्मक कछुवा बेच्नेले अहिले प्रशस्त व्यापार गरिरहेका छन्। भक्तपुर नागपोखरीका आशाकाजी रञ्जितकार मूर्ति बनाउँछन्। घर बनाउने साइत परेका बेला दैनिक १५ वटासम्म कछुवाको मूर्ति बिक्री गरेको उनी बताउँछन्।
झन्डै नौ वर्षदेखि ढुंगाका सामान बनाउँदै आएका रञ्जितकार भन्छन्, ‘यसपालि वर्षाको मौसम गएपछि व्यापार बढ्न थालेको हो। मानिसहरू दुई सय रुपैयाँदेखि १५ सयसम्मका कछुवा खरिद गर्छन्।’
भूकम्पले भत्किएका घर बनाउन थालिएकाले हिजोआज अरु देवीदेउताका मूर्ति र सामानभन्दा कछुवा नै बनाइरहेको उनले बताए।
‘अरु मूर्ति कहिलेकाहीँ मात्र बिक्री हुन्छ तर आजभोलि धेरै बिक्री हुने कछुवा नै हो,’ उनले भने। नयाँ भवन बनाउँदा जगमा ढुंगाको कछुवाको मूर्ति राख्ने चलनले गर्दा नेपाली प्रस्तर कलाको पनि प्रवर्द्धन भएको रञ्जितकारको भनाइ छ।
Prevहातका यी ७ रेखाबाट थाहा पाउन सकिन्छ तपाईको भविष्य, यसरी आफै हेर्नुहोस्
Nextमात्रै २ वटा ल्वाङ्ले तपाईको जिन्दगी बदल्न सक्छ
किन बढ्छ मोटोपन ? यसरी घटाउनुहोस् सजिलै
निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् माघ १७ देखि २३ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल
ऋणबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अप्नाउनुहोस्
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (17146)
अस्पताल नगएरै गर्भमा छोरी छ कि छोरा सजिलै पत्ता लगाउने तरिका हेर्नुहोस् (14073)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (13160)
“मलेसियामा नेपाली युवकले नेपाली युवतीको नि,र्मम ह, त्या गर्यो ( भिडियो हेर्नुस )” (13010)
यी ४ बार जन्मिने व्यक्ति हुन्छन् सबै भन्दा भाग्यमानी (12606)